Wholesale Yakaiswa Pamuviri fekitori nevatengesi | YakadzikaFast
Dhizaini yeiyo yepamusoro ROP mukuboora kwakadzika uye kwakaomarara mafomati, PDC yekuboora zvishoma inogara ichaboora kubva pasi kusvika pasi zvakananga nekumhanya kushoma kana kunyangwe kamwe chete, ichichengetedza yakawanda yenguva yekuboora uye mutengo.
Zvakasiyana netricone bit, PDC chibooreso chinomhanya nechepasi WOB asi Yakakwirira RPM, saka inowanzo shanda nemadhorobha mota kutora kutenderera kumhanya.
Iko kushanda kwePDC chibooreso kunoenderana zvakanyanya nePDC cutters, isu tinopa yakasarudzika mhinduro kune yakatarwa chinodikanwa pane akasiyana mafomu.
Akaiswa mushonga wedhaimani Bit ine Cylindrical toothed blade iyo ine yakakwira ROP mune yakaoma uye yakaoma diki yakaoma yekudyidzana mapuratifomu mafomu.
Targeted dhizaini:Iyo ine yakasarudzika dhizaini yekukwirisa simba uye hasha kuumbwa. Iyo inokodzera denser shale uye argillaceous s uye dombo, uye quartzs uye dombo nekukwirisa kwakanyanya, matombo nedombo rejecha rakapindirwa strata zvakanyanya kukodzera.
Yakasarudzika yemukati koni dhizaini: Iyo yakasarudzika geometry uye kurongedzwa kwemukati koni yeiyo chibooreso zvishoma inovandudza kutema mashandiro pakati pebhokisi rekuboora kuwedzera hupenyu hwakazara hwechibhorani.
Iyo yakasarudzika matrix fomula: Iyo fomula yematrice poda ine yakazvimirira yehungwaru kodzero yekodzero uye epamberi sintering tekinoroji yagadzira michina zvivakwa zvematrix kusvika kune epamberi epamusoro nhanho.
Yakakura uye yakadzika kuyerera chiteshi dhizaini: Iyo radial yakafara uye yakadzika kuyerera chiteshi inobatsira kune yekuchenesa uye kutakura kweanocheka uye inodzivirira zvishoma bhora.
1. Yakasarudzika yemukati koni dhizaini: Iyo yemukati koni yediki inotora yakasarudzika geometric chimiro uye dhizaini, iyo inovandudza kutema mashandiro epakati epakati chikamu uye inowedzera hupenyu hwese hwebiti.
2.Wide uye yakadzika mumhanyi dhizaini: Radial yakafara uye yakadzika mumhanyi, inoenderanawo nekuchenesa uye kufamba kweanocheka uye inodzivirira kuchera matope sludge.
3. Cable dhayamita kuchengetedzwa: Iyo yekuwedzera kureba uye dhayamita kuchengetedzwa kwakadzika chip kubviswa paburi uye dhizaini yekucheka mazino ane reverse kukwenya gomba kunogona kutorwa.
1.Matrix yakavhenganiswa nezvikamu zvemadhaimani nechero rakasarudzika kuenzanisa mafomu, kugadzirisa iyo yekucheka yedhaimani, simba rekunamatira uye kupfeka kuramba kuti uwane ROP iri nani.
Imwe neimwe yakaisirwa nhumbu dhizaini inoenda yakawandisa computational fluid dynamics kuongororwa kuti ive nechokwadi chekuti kukuya-zvekare uye kutenderera-kwese kwekucheka kwakabviswa.
Yedu yakaisirwa nhumbu inokwanisa kuchera mafomati kubva pakapfava kusvika kune akaoma.
3.Bits vane ematongerwo akaturikidzana anoumbwa anokosha musanganiswa wemadhaimani upfu hwakasiyana saizi uye chiwanikwa. Musanganiswa kuumbwa kunogona kuitirwa kuchera kwakasiyana maitiro.
Yakaisirwa Biti Yakange Yakakwira-kuita kweTurbine Xiwang Oilfield
Yakajairwa PDC Bits uye Tricone
Bits haikwanise kuve nekuita kwakakura mukuumbwa kwakanyanya kuoma neLimestone neDolomites
Kuti uwane kuita kukuru, Dhizaini yakadzika yakasimbisa Yakatemerwa Bit 8 1/2 ”DI705 kunyorera turbine.
Nechekuwedzera mifananidzo ye103. Iyo yakazara nguva ingangoita makumi matatu neshanu, mashanu maawa, uye ROP iri 2.75.
MuXiwang Oilfield muChina, kuumbwa kwacho kwakaomarara zvinova zvinonzi limestone / dolomites uye simba rekumanikidza riri 24000PSI -32000PSI. Anoshanda anodiwa kuchera gomba re 8 1/2 ”neturbine. Iyo yakajairwa PDC Bit kana Tricone Bit haina kuita zvakanaka muchikamu chakadai. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu aya, Deefast inopa yakasimbiswa Impregnated Bit (8 1/2 ”DI705) yekuisa turbine uye kuzadzisa zvibodzwa zvikuru.
2. Kuchera parameter:
Kuchera Pressure / Kurema paBit 40-50KN
Yekumhanya Speed 65 RPM
Kuyerera Rate 29L / S
Iyo Yakaiswa Pamuviri (8 1/2 "D1705) idiki nyowani yakagadzirirwa kunyanya kugadzirisa turbine uye kuomarara kuumbwa.
Iine yakasarudzika yemukati koni dhizaini uye yakasimbisa matrix muviri, yakavandudza simba uye kugadzikana kwekuboora mune hasha lithology. Iine yakawedzera tsoka ye103, iyo yakazara nguva ingangoita maawa 37.5, uye ROP iri 2.75 mita / awa. Mutengi anogutsikana nekuita kwayo uye anobatsira kuchengetedza 30% nguva uye ingangoita 50% mutengo uchienzanisa neyapfuura mhinduro.
Pashure: Akaiswa mushonga wekupinza Drill Bit
Zvadaro: Simbi Muviri PDC Bi-pakati Drill Bit
Drill Bit Vagadziri
Drill Bit Vatengesi
Tricone Drill Zvishoma
Akaiswa mushonga wekupinza Drill Bit